Ciidamada Itoobiya oo durbaba billaabay kufashada haweenka Soomaalida, madaxweyne Cabdullahi Yuusuf iyo ra'isul wasaare Geeddi oo si weyn u doonaya in la bililiqeysto suuqa Bakaaraha iyo weerar culus oo maanta lagu qaaday ciidamada Itoobiya oo marayay Aragaarka sarta Soobe ee KM5. Ruunkinet 13/03/07
Ciidamada Itoobiya ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa billaabay in ay kufsadaan haweenka Soomaaliyeed ee maraya wadooyinka Xamar.
Suuban Macalin Cali Geeddi oo saarneyd gaari dameer marayay agagaarka Ceel Cirfiid ayaa mar ay ka hadleysay shir jaraa'id oo ka dhacay magaalada Muqdisho sheegtay in ay kufsadeen 2 nin oo Itoobiyaan ah ayagoo jir dilna ku sameeyay haweenaydaasi.
Axmed Cali Xasan oo ah ninka qaba haweynayda ayaa xaqiijiyay arrintaasi ayadoo ay dhakhaatiirta caafimaada u sheegeen ninkaasi in aanu ka sameyn fal gal muddo 6 bilood ah si loo ogoodo in ay qaadsiiyeen cudurka AIDS-ka ee ku badan dalka Itoobiya.
Itoobiya ayaa ka mid ah wadamada Afrika ugu badan ee qaba cudurka dilaaga ah ee AIDS-ka.
Dhanka kale, warar lagu kasoon yahay ayaa tibaaxaya in ay madaxweyne Cabdudllahi Yuusuf iyo ra'isul wasaare Geedi ka wada hadleen sidii ciidamada Itoobiya iyo kuwa dowladda ee u badan reer Puntland ay u geli lahaayeen suuga Bakaaraha ee magaalada Muqdisho.
Ciidamada Itoobiya iyo Kuwa Puntland ayaa horay loogu sheegay in dhaqaalaha ugu badan ee yaal magaalada Muqdisho yaaliin Suuqaasi.
Warka ayaa intaasi ku darya in Col. Yuusuf iyo Prof. Geeddi ay damacsan yihiin in weerar gaadmo ah lagu qaado suuqa bakaaraha ayadoo lagu marmarsiisanayo in hub laga baaraya.
Ganacsatada suuqa Bakaaraha oo arrintaasi si wanaagsan ula socota ayaa la sheegay in ay dahabka iyo lacata ay geysteen meelo qasoon ayagoo sidoo kale ika difaacaya ciidamada la filayo in ay soo weeraraan suuqaasi.
Dhinaca kale, waxaa maanta ka dhacay agagaarka Sarta Suube ee KM 5 weerar lagu qaaday ciidamada Itoobiya oo marayay goobtaasi.
Ciidamada Itoobiya ayaa weerarkaasi ugu jawaabay rasaasi ay ku rideen dad rayid ah oo goobtaasi ku sugnaa.
Rasaasta ay rideeyeen ciidamada Itoobiya ayaa la sheegay in ay ku dhaacaween ilaa iyo 7 ruux oo rayid ah.